ဆားဘီးယား ကစားသမားကို မန်ယူနည်းပြ မော်ရင်ဟို သွားရောက်လေ့လာ၊ ဂလက်ဆီ၌ ခြေစွမ်းပြနေသော မိုဗ? - Yangon Media Group
ဆားဘီးယား ကစားသမားကို မန်ယူနည်းပြ မော်ရင်ဟို သွားရောက်လေ့လာ၊ ဂလက်ဆီ၌ ခြေစွမ်းပြနေသော မိုဗ?
မန်ယူနည်းပြမော်ရင်ဟိုသည် သူ၏ အသင်းကိုအားဖြည့်ရန်အတွက် ပြီးခဲ့သည့် ကြာသပတေးညက မွန်တီနီဂရိုးနှင့် ဆားဘီးယားယားတို့ရင်ဆိုင်ကစားခဲ့သော ဥရောပနိုင်ငံများလိဂ်ဖလားပြိုင်ပွဲကို သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ကာ ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားသမား ဆာဗစ်၏ခြေစွမ်းကို သွားရောက် လေ့လာခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
မကြာသေးမီကမှ လာဇီယိုနှင့် စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုထား သောဆာဗစ်ကို မန်ယူအသင်းက ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီက တည်းက ခေါ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားနေခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေသည်။ ဆာဗစ်ကို နွေရာသီဈေးကွက်အတွင်း ခေါ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခါနည်းပြ မော်ရင်ဟိုက လာမည့်ဇန်နဝါရီဈေးကွက် အတွင်းခေါ်ယူနိုင်ရန် ဆာဗစ်၏ခြေစွမ်းကို ကွင်းထဲအထိ လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မော်ရင်ဟိုသည် ရီးရဲလ်ကစားသမားဟောင်းမီဂျာတိုဗစ်နှင့်အတူ ဘေ့စ်ဘော ဦးထုပ်ဆောင်းကာပွဲကြည့်စဉ်ပေါ်တွင်လာ ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါပွဲ၍ ဆာဗစ်က တိုက်စစ်မှူးမီထရိုဗစ်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ရန် တစ်ဂိုးဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သည်။ သတင်းများ၏ဖော်ပြချက်အရ မန်ယူနည်းပြမော်ရင်ဟိုသည် အဆိုပါပွဲတွင် ဆာဗစ်တစ်ဦးတည်းကိုသာ လာရောက်အကဲခတ်ခြင်းမဟုတ်ခဲ့ဘဲ ဖီအိုရင်တီးနားနောက်ခံလူဖြစ်သည့် ဆားဘီယားအသင်းမှ မီလင်ကိုဗစ်ကိုပါ လာရောက်လေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အသက် ၂ဝ အရွယ်သာရှိသေးသည့် ဗဟိုခံစစ်မှူးမီလင်ကိုဗစ်သည် ယခုရာသီစီးရီးအေတွင် ခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်သောကြောင့် မော်ရင်ဟိုက အားနည်းနေသည့် မန်ယူအသင်း နောက်တန်းအတွက် မျက်စိကျနေ ခြင်းဖြစ်သည်။
ဗြိတိန်သတင်းဌာများ၏ ဖော်ပြချက်အရ မော်ရင်ဟိုသည် မေဂျာလိဂ်ကလပ် ဂလက်ဆီအသင်းတွင်ကစားနေသည့် တိုက်စစ်မှူးအီဘရာဟီမိုဗစ်ကို ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ရန် စဉ်းစားနေကြောင်းလည်းသိရသည်။ မန်ယူအသင်းတွင် နှစ်ရာသီကြာကစားသွားခဲ့သော အီဘရာဟီမိုဗစ်သည် ဂလက်ဆီအသင်းတွင် ၂၅ ပွဲကစား ၂၁ ဂိုးသွင်းယူကာ ခြေစွမ်းပြနေသောကြောင့် ဇန်နဝါရီဈေးကွက်အတွင်း ခေါ်ယူရန် စီစဉ်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်လျက် ရှိသည်။
ရွှေဘောလုံးဆု အိပ်မက်ကြောင့် စပိန်တွင် သွားကစားချင်ကြောင်း ဟာဇက် ဖွင့်ဟ၊ ဆိုးသွမ်း ပရိသတ်မ??
လက်စတာမြို့ ပေါက်ကွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လူသုံးဦးကို ဗြိတိန်ရဲ ဖမ်းဆီး
ပီအက်စ်ဂျီနှင့် ပွဲတွင် တိုနီခရူးစ်နှင့် မိုဒရစ် ပါဝင်ရန် မသေချာသေး